The Ab Presents Nepal » पुरुषमाथी यसरी हुन्छ हिंसा, मैले देखेको पुरूष हिंसा: श्रदा के.सी
पुरुषमाथी यसरी हुन्छ हिंसा, मैले देखेको पुरूष हिंसा: श्रदा के.सी
सबैको मुखबाट सुनिन्छ, पुरुषको मन कठोर हुन्छ । उनीहरु अक्सर सानो कुराले रुदैनन् । अनि भन्छन्, कति धेरै निर्दयी हुन्छन् यी पुरुष जाती ! तर कसैले यो देख्दैन उनीहरुका आँशु त सबै सकिन्छन्, पसिना बनेर । जो हरेक दिन रात आफ्नो परिवारको लागी मिहिनेत गर्दा बग्छ । हरेक रात रोएर काट्दा पनि सधै मन्द मुस्कानका साथ उभिने पुरुष निर्दयी कसरी हुन सक्छ ?
भन्छन्, छोरी-मानिस दुई घरको भाग्य लिएर जन्मिन्छन् । फेरी सबैले यो किन सोच्दैनन् कि छोरा पनि दुई घरको जिम्मेवारी बोकेर जन्मिछन् ? एउटी नारी सँगसँगै उसले आफ्ना जिम्मेवारी पनि अङ्गालेको हुन्छ, उसका जिम्मेवारीहरू पनि बढेका हुन्छन् ।
हर कोही भन्छन्, आफु जन्मेको घर छुट्छ । तर यो किन सोच्दैनौ तिम्रो जिन्दगीमा अर्को घर पनि त जोडिन्छ, तिम्रो जिन्दगीको नयाँ सुरुवातमा तिमी सँगसँगै उसको नाम जोडिन्छ । जो तिम्रो जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण पाटो बन्न पुग्छ ।
जब तिमी कुनै पुरुषको नामको सिन्दुर लगाउँछौ भने दु:खी किन हुने ? उसको नामको भनेर उसले त झन् तिम्रो रंगिएको जिन्दगीलाई जिन्दगीभरी रंगाउने एउटा अटुट बन्धन दिएको हो । गलामा मंगलसुत्र बाधिदिन्छ्न् र हामी भन्छौं उसको नामको । यो त तिम्रो जिन्दगीभरी तिम्रो रक्षाका लागि उसले दिएको अर्को बाचा हो ।
सँधै महिलाको हकहितका लागि आवाज उठे, महिला हिंसा विरुद्ध कैयौं कार्यक्रम, कैयौं गोष्ठी सेमिनार गरियो । तर त्यहीं ठाउँमा पुरुषका लागि न कुनै आवाज उठ्यो न त कुनै गोष्ठी सेमिनार नै भयो ।हर कोही भन्छ्न्, महिला हिंसा दिनानुदिन बढ्दै छ । महिलाहरु पीडित छन् । महिला हिंसा देख्ने हाम्रा यी आँखाले किन कहिल्यै पुरुष हिंसा देखेनन् ?
हो, आमा महान छिन् । आमाको मूल्य अमुल्य छ । हामी जन्मिदाँ आमाको शरीरबाट कैयौँ लिटर खुन बग्यो होला । हामीलाई पिलाएको दश धारा दुधको मूल्य कसैगरी चुकाउँन सकिँदैन ।म मान्छु, आमाले संसार देखाउँछिन् । नौ महिना कोखमा राख्छिन् । उनको पीडा उनको दुख वर्णन गरी साध्य नै छैन ।
सामाजिक दृष्टिकोण र चेतनाबारे लेख्न रुचाउने के.सी. सल्लेरी खबरमा कला-साहित्य विविधमा कलम चलाउँछिन् । हामीले यो खबर सल्लेरी खबरबाट लिएका हौ |